Yini engcono nokuningi practical Grill grates cast iron noma insimbi engagqwali?
isikhathi afudumele ngonyaka thina njalo phambili. Summer - ilanga, ulwandle, kungene umoya ohlanzekile futhi, yebo, Uhambo edolobheni for a epikinikini nomkhaya nabangane. Kubalulekile ukulungiselela ngokucophelela lezi zenzakalo. Okwesikhathi esithile omuhle akubalulekile nje ukukhetha ekahle kakhulu ezokungcebeleka, ukuthenga imikhiqizo ezidingekayo futhi iqoqe inkampani ethokoza. Kufanele futhi ungakhohlwa mayelana nazo zonke izinto ezizungezile, okubandakanya hlupha kanye hlupha for ukosa. Phela, epikinikini yangempela engacabangeki ngaphandle losiwe ngomlilo shish kebab kanye nemifino okugazingiwe. Eliphekiwe ngale ndlela imikhiqizo babe nephunga ezikhangayo - intuthu, ukugcina zonke juiciness hhayi nabo umlilo ngqo. Ulwazi oluqukethwe kulesi sihloko kuzokusiza ukhethe into efanele, ngaphandle okuyinto akunakwenzeka ukubhaka iyiphi okukhona izintaba - hlupha for ukosa. Nquma uhlobo idivayisi, kuye ngokuthi lokho obhekene ukupheka.
Grill Izinsimbi: izinhlobo ezinkulu
Ngokuyinhloko-ke Kuyaphawuleka ukuthi kugridi ukuze hlupha kungaba yingxenye yalo lonke kudivayisi, futhi ukuba abe isihloko ehlukile. Manje on ukudayiswa, kukhona anhlobonhlobo grills kagesi, lapho ungakwazi ukubhaka inyama noma inhlanzi ekhaya. Kodwa, ukudla ngeshwa, bona okuphekiwe kungekho ekusukeni iphunga eqondile intuthu. Futhi ngehele ekhona ukubunjwa ukosa inyama abaningi nge izingxenye nezilandiso. Olunye uhlobo idivayisi ezincane kudivayisi detachable ehlanganisa ezimbili izingcezu anezikhala. Kalula isibambo fixed igcina nemigoqo ngesikhathi operation ephendukela ngokulinganayo yokuwugazinga imikhiqizo. Okwesibili uma uthenga kufanele sinake izinga material kusuka lapho idivayisi senziwa. Le mikhiqizo ingakhishwa yensimbi noma owakhiwa Alloys ezahlukene. Lezi zingozi zihlanganisa ama engagqwali Izinsimbi. Sibala izakhiwo kanye izinzuzo ngamunye ngenhla amabili.
Sakaza yensimbi hlupha for ukosa: izici eziyisisekelo
Lolu hlobo okuqinile-cast imigqa eyamukela ekhiqizwa noma sakhiwa induku corpulent. I okusezingeni eliphezulu conductivity ezishisayo ivumela umkhiqizo yabalingisi ukufudumeza nombala ngaphesheya kwamanzi, iqinisekisa high ukudla esiphelele. Le nto futhi akashintshi ezakheke, okuyinto akulona imigqa eyamukela esihle Alloys ezahlukene. I ethile kuphela cast iron zalapho abangenalo enamathela ekhethekile ingozi okuvela nokugqwala on ubuso bayo. Ngakho qiniseka ukuthi hlupha ngemva kokusebenzisa kufanele wageza bese gcoba iyiphi amafutha zemifino. Lokhu kuzophinde ukuvimbela imikhiqizo esivuthayo. A owagcoba ngaphambi kokusebenzisa ngehele calcined e ukushisa ezinhle.
Grill grates ezenziwe ngensimbi engagqwali: izakhiwo
Lokhu kwaziswa eliphezulu has a inzuzo enkulu uma ziqhathaniswa cast iron - lula. Ngakho-ke, insimbi engagqwali ngehele zisabalele. Zingaba yomibili esikhiphekayo futhi izoso kanye namadivayisi ezimele ukusonga. Lesi sakamuva ziwusizo kakhulu uma ukuthosa imifino, inhlanzi kanye nezinye izingcezu ezincane ukudla. Ukukhetha kuwufanele ukuthenga nehele nge non stick enamathela izinga eqinisekisa ukupheka.
Uyini hlupha kangcono ukosa?
Ngezindlela eziningi, okukhethayo kuzoya ngohlobo ukudla, usayizi umkhiqizo kanye somphumela ohlosiwe. Iya ku imvelo by ukuhlela epikinikini esikhulu? Misa okukhethayo on the hlupha nensimbi isimo ezisebenza. Ufuna ngokushesha Fry izinhlanzi uhambo nokudoba? Khona-ke ukukhetha ofanele kakhulu kuwe - alo idivayisi ye steel ukukhanya engagqwali. Kunoma ikuphi, umphumela uyoba emangalisayo - ukudla ebomvana elimnandi umusi!
Uyini nesigubhu? Incazelo, inhloso kanye nokusetshenziswa
Funda ukuthi yimiphi izibuko Site round ubuso
"Stokke": prams, esiyingqayizivele ngokuya ukusebenza kanye nomklamo
Stroller Ukhululekile Maclaren Techno XLR for emzini futhi travel
Ngodonga Glass vs Uhlaka izakhiwo: umehluko kanye namasu isicelo
Yini okufanele ibe yensimbi engcono
Yini okumele uyenze uma uphathwe kabi izinso? Nquma ukuthi ubuhlungu izinso
Umuzi Italian sabafileyo: i Capuchin catacombs Palermo
Indlela ukukhipha isibonelelo amasevisi ishayise. Lapho ukukhipha imali yesibonelelo sikahulumeni iqashwe
Movie aphuma phambili wango 2006: Uhlu abawinile
Likuphi Kong? Ingabe kuyazuzisa ke ukuvakashela?
Kungaziphi izizathu abe ficus eshiya ukuwa
Umuthi 'Antral ": yokusetshenziswa, analogs, odokotela yangempela
Amakamelo okulala ezingane: amacebiso okuhlobisa
Projection phezu windscreen - isicelo yimpumelelo zezindiza ubuchwepheshe